OTU ESI ECHEKWA OHERE DISK C NA WINDOWS 7 - WINDOWS - 2019
Otu esi ehichapu diski diski site na mkpofu na Windows 7
Microsoft eweputara ọtụtụ nsụgharị nke sistemụ arụmọrụ Windows 10, nke ọ bụla nwere àgwà nke ya ma kwadoro maka ndị ọrụ dị iche iche. N'ihi eziokwu ahụ na arụmọrụ nke nsụgharị ọ bụla dị iche, ụgwọ ha dịkwa iche. Mgbe ụfọdụ ndi na-arụ ọrụ na mgbakọ nke ụlọ chọrọ ka ha nwekwuo Pro, nke a, anyị ga-achọ igosi otú a ga-esi mee nke a site n'ịtụle ụzọ abụọ.
Hụkwa: Gịnị bụ ikikere dijitalụ Windows 10
Ịkwalite Windows 10 Home na Pro Version
Ọ bụrụ na i kpebeghị ma ị ga-emelite ọhụrụ ahụ, anyị na-akwado ka ị gụọ ihe ndị ọzọ anyị nwere na njikọ na-esonụ. Onye edemede nke isiokwu a kọwara nkọwa dị iche iche na mgbakọ dị iche iche, ya mere i nwere ike ịmụta atụmatụ nke Home na ọrụ Windows 10. Anyị na-agbanye aka nyochaa usoro nke imelite.
Gụkwuo: Esemokwu n'etiti Windows 10 sistemụ arụmọrụ
Usoro 1: Tinye igodo dị
Ịwụnye Windows mepụtara ikikere site na ịbanye igodo mmeghe kwesịrị ekwesị. Mgbe nke ahụ gasịrị, ebudatara faịlụ ndị dị mkpa. Ọ bụrụ na ị zụrụ isi site na ụlọ ahịa dị n'ịntanetị, ị nwere ngwa flash USB ma ọ bụ DVD, naanị ịkwesịrị ịbanye koodu ma malite usoro nrụnye. A na-eme nke a dị ka ndị a:
Mepee menu "Malite" ma gaa "Nhọrọ".
Pịgharịa gaa ịchọta ngalaba. "Imelite na Nche".
N'elu aka ekpe, pịa ụdị. "Tinye ọrụ".
Pịa na njikọ "Gbanwee Key Product".
Detuo mkpịsị ugodi site na akwụkwọ ozi ahụ na e-mail ma ọ bụ chọta ya na igbe ahụ na ebu. Tinye ya na ubi pụrụ iche, wee pịa "Na-esote".
Chere maka nhazi ozi iji mezue.
Mgbe ahụ, a ga-ajụ gị ka ịwelite mbipụta OS nke Windows 10. Gụọ ntụziaka ma gaa n'ihu.
Ngwaọrụ wuru na Windows ga-emezue nbudata faịlụ na ntinye ha na akpaghị aka, mgbe nke a gasịrị, a ga-emelite ya. N'oge usoro a, agbanyụla kọmputa ma ọ bụ kwụsị njikọ Ịntanetị.
Usoro nke 2: Ịzụta ma melite nkwalite
Usoro gara aga dị mma naanị maka ndị ọrụ ahụ bụ ndị zụrụ akara igodo site n'aka onye ọrụ ikikere nwere ikikere ma ọ bụ nwee disk ikikere ma ọ bụ USB flash drive na koodu gosiri na igbe ahụ. Ọ bụrụ na ịnwetaghị melite ahụ, akwadoro ime nke a site na ụlọ ahịa Microsoft kwadoro ma wụnye ya ozugbo.
Ịbụ na ngalaba "Nhọrọ" meghee "Tinye ọrụ" wee pịa njikọ ahụ "Gaa na Nchekwa".
N'ebe a, ị nwere ike ịmatakwu arụmọrụ nke nsụgharị ahụ eji.
N'elu elu nke windo, pịa bọtịnụ ahụ. "Zụrụ".
Banye na akaụntụ Microsoft gị ma ọ bụrụ na i mebeghị otú ahụ.
Jiri kaadị ejiri ma ọ bụ gbakwunye ya iji kwụọ ụgwọ maka nzụta ahụ.
Mgbe ịchọtara Windows 10 Pro, soro ntuziaka na ihuenyo iji mezue nwụnye nke mgbakọ wee gaa n'ihu iji ya mee ihe.
Ọ na-emekarị mgbanwe na nsụgharị ọhụrụ nke Windows n'enweghị nsogbu, mana ọ bụghị mgbe niile. Ọ bụrụ na ị nwere nsogbu na mmalite nke mgbakọ ọhụrụ ahụ, jiri ndụmọdụ kwesịrị ekwesị na mpaghara ahụ "Tinye ọrụ" na menu "Nhọrọ".
Ihe na-eme ma ọ bụrụ na ịnweghị ọrụ Windows 10
Otu esi achọta koodu mmeghe na Windows 10